Mpanamboatra sy mpamatsy fahitalavitra nomerika | China Digital TV Equipment Factory
ZJ3308AT 8 amin'ny 1 ATSC Modulator
Product Overview ZJ3308AT 8 amin'ny 1 ATSC modulator no vokatra vao natao nanohana ny fidiran'ny IP. Izy io dia manana fantsona 8 multiplexing ary fantsom-panodinana 8 ATSC, ary manohana ny fampiasa 256 IP farafaharatsiny amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo GE. ZJ3308AT dia manana fivoahana mahery vaika miaraka amina mpampita 8 tsy mifanila (50MHz ~ 960MHz) amin'ny alàlan'ny interface RF output. Ny rafitr'ity fitaovana ity dia azo fehezina sy havaozina amin'ny alàlan'ny tambajotra, izay azo ampiasaina betsaka amin'ny fananganana tambajotra nomerika ATSC sy ny ...
Ny drafitra ZJ3542D multi-input modulator dia fitaovana iray manontolo izay mampiditra demodulation, trans-mux ary modulation amin'ny tranga iray hanovana ireo signal ho output RF. Tranga 1-U izay manohana ny fampiasa tuner 4 hahazoana signal avy amin'ny satelita, tariby na terrestrial. Mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa, ny ZJ3542D dia ampiarahina ihany koa amin'ny fampiasa ASI 2, ary ny famoahana misy vondrona 2 misy seranana ASI sy seranan-tsambo IPDP 2 MPTS UDP. Ny fambara modulated output dia tokony horaisin'ny TV, STB sns ... Ny USB por ...
Outline ZJ3402E dia maoderina avo lenta izay novolavolaina araka ny fenitra DVB-S2 (EN302307) izay fenitry ny zana-tsokajin'ny telecommunication satellite broadband. Izy io dia ny fanovana ny fampiasa ASI sy ny fambara IP ho fivoarana nomerika DVB-S / S2 RF. Ny mode BISS scrambling dia ampidirina ao amin'ity modulator DVB-S2 ity, izay manampy amin'ny fanaparitahana ireo programa azonao antoka. Mora ny manatratra ny fanaraha-maso eo an-toerana sy lavitra amin'ny alàlan'ny rindrambaiko NMS mpizara Web sy LCD eo amin'ny tontonana eo aloha ....
Raiso an-tsary ity 8 in 1 DVB-T modulator ity dia fitaovana iray-in-iray novolavolainay. Izy io dia manana fantsom-pifaneraserana 8 sy fantsom-panodinana 8 DVB-T, ary manohana ny fampiasa 256 IP farafaharatsiny amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo GE sy 8 mpitatitra tsy mifanakaiky (50MHz ~ 960MHz) amin'ny alàlan'ny interface output RF. Ny fitaovana dia miavaka ihany koa amin'ny ambaratonga avo lenta, avo lenta ary vidiny ambany. Tena azo ovaina amin'ny rafitra fandefasana DTV vaovao. Endri-javatra lehibe ● Seranana 3 GE (max 256 IP ao): Data1 & Dat ...
Product Overview ZJ3306I 6 in 1 ISDB-T modulator no fitaovana lozisialy Mux-modulatezy farany. Izy io dia manana fantsom-pifaneraserana 6 sy fantsom-panodinana 6 (ISDB-Tb), ary manohana ny fidiran'ny IP IP 192 ambony indrindra amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo 3 GE sy 6 mpitatitra tsy mifanila (50MHz ~ 960MHz) amin'ny alàlan'ny interface output RF. Ny fitaovana dia miavaka ihany koa amin'ny ambaratonga avo lenta, avo lenta ary vidiny ambany. Tena azo ovaina amin'ny rafitra fandefasana DTV vaovao. Endri-javatra lehibe ● Seranan-tsambo GE 3 (ma ...
Ny drafitra ZJ2406B DVB- (T) modulator no fitaovana ampiasaintsika rehetra izay mampiditra demodulation, trans-mux ary modulation amin'ny tranga iray hanovana ireo signal ho DVB- (T) RF output ary IP output over UDP. Ny fitaovana misy fampiasa tuner 2 DVB-S / S2, seranan-tsambo GPS 10MHz iray ary seranan-tsofina 1PPS iray. Ireo mari-pamantarana namboarina dia tokony horaisin'ny fahitalavitra, STB sns.. Io modulator DVB- (T) io koa dia manohana miaraka amin'ny fanodikodinana nomerika sy tsy an-tariby nomerika mialoha. Ny asan'ny BISS dia tafiditra koa ...
ZJ2406 DVB-T2 Modulator Front sy Back Panel Sary
Ny drafitra ZJ2406 DVB-T / T2 modulator no vokatra vaovao novolavolainay mifanaraka amin'ny fenitra DVB-T / T2. Miaraka amin'ny haitao mandroso azy, ity modulator ity dia afaka mampiasa amin'ny fomba mahomby ny loharanom-pahalalana amin'ny tany ary ahafahana manome famantarana azo antoka ho an'ny fitaovana raikitra, finday ary azo entina. Raha ampitahaina amin'ny DVB-T, ny fahaizan'ny fantsona dia nitombo 30% teo ambanin'ny fitaterana mitovy amin'ny tahan'ny tabataba (CNR). Ankoatr'izay, ity fitaovana ity dia azo havaozina sy hifehezana amin'ny alàlan'ny tambajotra syst ...
Ny drafitra ZJ2406 DVB- (T) modulator no vokatra vaovao novolavolainay mifanaraka amin'ny fenitra DVB- (T). Miaraka amin'ny haitao mandroso azy, ity modulator ity dia afaka mampiasa amin'ny fomba mahomby ny loharanom-pahalalana amin'ny tany ary ahafahana manome famantarana azo antoka ho an'ny fitaovana raikitra, finday ary azo entina. Raha ampitahaina amin'ny DVB-T, ny fahaizan'ny fantsona dia nitombo 30% teo ambanin'ny fitaterana mitovy amin'ny tahan'ny tabataba (CNR). Ankoatr'izay, ity fitaovana ity dia azo havaozina sy hifehezana amin'ny alàlan'ny rafitry ny tamba-jotra ...
ZJ3348D 48 amin'ny 1 IP QAM Modulator
ZJ3348D 48 in 1 IP QAM modulator dia fitaovana Mux-scrambling-modulate izay rehetra novolavolain'i DEXIN. Izy io dia manana fantsom-pifandraisana 48 multiplexing, fantsom-pifandraisana 12 ary fantsom-paody 48 QAM (DVB-C) ary manohana ny 1536 IP farafahakeliny amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo 3 GE sy 48 mpitatitra tsy mifanakaiky (50MHz ~ 960MHz) amin'ny alàlan'ny interface output RF. Ny fitaovana dia miavaka amin'ny seranan-tseranana avo roa heny RF izay manitatra ny fantsom-pifandraisana ho an'ireo QAM mpitatitra. Endri-javatra lehibe ● Fampidirana Max 1536 IP amin'ny seranan-tsambo 3 GE (interface SFP ...
32 amin'ny 1 IP QAM Modulator
Ity modulator IP QAM 32 amin'ny 1 ity dia fitaovana Mux-scrambling-modulate rehetra-amin'ny-iray. Izy io dia manohana ny fampiasa IP 1024 farafaharatsiny amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo 3 GE sy fantsom-panafody 32 multiplexing QAM (DVB-C) modulate miaraka amina mpitatitra tsy mifanila (50MHz ~ 960MHz) amin'ny alàlan'ny interface output RF. Ny famolavolana modular sy karama azo ampiakarina dia mahatonga azy io ho azo ovaina indrindra, azo ianteherana tokoa amin'ny fahombiazana avo lenta, izay azo ovaina amin'ny rafitra fandefasana CATV. Key Featu ...
16 amin'ny 1 IP QAM Modulator
Ity modulator IP IP QAM 16 amin'ny 1 ity no fitaovana Mux-scrambling-modulateur all-in-one vaovao novolavolainay. Manana fantsona 16 multiplexing, fantsom-pifandraisana 16 ary fantsom-paody 16 QAM (DVB-C), ary manohana fampiasa IP 512 farafaharatsiny amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo 3 GE sy 16 mpitatitra tsy mifanila (50MHz ~ 960MHz) amin'ny alàlan'ny interface output RF. Ny fitaovana dia miavaka ihany koa amin'ny ambaratonga avo lenta, avo lenta ary vidiny ambany. Tena azo ovaina amin'ny CATV br ...
ZJ3544I dia fitaovana fampidirana ambony matihanina izay misy ny encoding, multiplexing, scrambling ary modulation. Izy io dia manohana ny 8/12/16/20/24 fampiasa HDMI, fidirana tuner iray DVB-C (ATSC tsy voatery) ary farafahakeliny 512 IP fampiasa amin'ny seranan-tsambo Data1 (GE). Izy io koa dia manohana ny DVB-C RF miaraka amina 16 tsy misy mifanila na DVB-T / ATSC RF miaraka amina mpitatitra tsy mifanila 8, na ISDB-T RF miaraka amina mpitatitra tsy mifanila 6, ary manohana ny 16/8/6 MPTS toy ny fitaratry ny mpitatitra 16/8/6 amin'ny alàlan'ny seranan-tseranana Data2 (GE). Ity dingana feno ...